Vaovao - Ahoana ny sary sokitra vita amin'ny metaly
Ny sary sokitra metaly metaly dia manana anjara asa tsy azo ovaina amin'ny famolavolana sehatra sy haingoana. Ny sary sokitra metaly dia azo apetraka amin'ny toerana malalaka ivelany na toerana anatiny, ary azo ampiasaina amin'ny sehatra nentim-paharazana.
Fantatsika fa ny sary sokitra vy dia misy karazana toy ny sary sokitra vy, sarivongana varahina, sarivongana varahina, sary vongana korten sns. Ny vidin'ny fanaovana dia tsy mitovy amin'ny akora. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny sary sokitra stainless vy dia nampiasaina tamina toerana isan-karazany toy ny famoronana tany, hotely, club, birao, trano, trano fivarotana, toeram-ponenana, villa, amoron-dranomasina, trano fialan-tsasatra sy ny sisa. Raha ampitahaina amin'ny sary sokitra fiberglass, ny sary sokitra vita amin'ny vy dia manana endrika milamina kokoa, izay mety kokoa amin'ny endrika maoderina. Misy tombony vitsivitsy, ohatra, hanana fotoana lava kokoa, mora entina, mametraka, mitazona sns.
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD. no matihanina mpanamboatra sary sokitra. Ny orinasa dia nanamboatra sary sokitra maro tao an-trano sy tany ivelany, ary nahazo ny lazany avy amin'ny mpanjifanay. Izahay dia manome ny vokatra vita amin'ny sary sokitra metaly, mihoatra ny 1000 ny vokatra tianao. Izahay dia mandray tsara ny fanontanianao raha tianao izany.
Tamin'ny 2008, namokatra sarivongana metaly hosodoko goavambe ho an'i Indonezia izahay, izay napetraka tao amin'ny toeram-pivarotana ho fampisehoana zavakanto. Ny sary sokitra an-toerana dia vita amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony 316L, izay nolokoina tamin'ny loko mainty sy loko volamena araka ny safidin'ny mpanjifa. Ary ny sarivongana loco dia misy halavany 10,4m * 2,3 m ny sakany * 3,5m haavony, maharitra 3 volana eo ho eo vao vita. Ary farany dia ampitao amin'ny tànana mpanjifa am-pahatoniana, ary mahazo fanehoan-kevitra avo lenta avy amin'ny mpanjifa. Ny nampanantenanay dia ny hanome kalitao tsara ho an'ny mpanjifa rehetra, izy rehetra ireo dia mpanjifa VIP izahay raha mametraka baiko sculpture aminay.
Fomba fifandraisana: afaka mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fanarahana fomba raha te hahalala bebe kokoa raha liana ianao.
mpivarotra: Ramatoa Cathy
Miresaka izahay: 0086-13950110440